Supply Mano: 20Sets / 30days
PLC: Delta (Taiwan) / Xinje (Wuxi) HMI Chinovhara: Winview (Taiwan)
vachiridza Cylinder: Sanhuan (China) Valve: Airtack (Taiwan)
Mould yokutanga & Yakagumisa Cylinder: Airtac (Taiwan) Anoisa Cylinder: Airtac (Taiwan )
Main ngarurege muoti: By Cylinder kubva Airtac (Taiwan)
Company bvumidzwa cylindrical zvakananga-aibuda vharafu rinoshandiswa compressors edu. The vharafu yakaitwa kubva Stainless simbi bhandi yabva Sweden uye zviri pachena kubva pakakuvara munguva kushanda upenyu.
The pisitoni edu mhepo compressor aplies ari musimboti kukandira chromium yakanamirwa pamifananidzo mhete, upenyu kushanda chinoshanda 3 kusvika 4 nguva.
Company nemumwe compressor dymanic BALANCInG michina. The vibration ndiyo chete muzvina zvenyika vomureza.
Mhepo yose compessor adopts rinopfungaira kubereka pasina kubereka goko (Zvichisanganisa unobatanidza tsvimbo).
Kuti ave nechokwadi chokuti kuchengeteka uye rakavimbika mhepo compressor, redundancy magadzirirwo musimboti iri wokurera uye vakawanda kudzivirira matanho anotorwa: akadai zadzisa inodzivirira; overheat inodzivirira; danho-kutadza kudzivirirwa; undervoltage inodzivirira; abudise apo kuyerera; startup pasi mamiriro nevamwe razero.
High kuvimbwa, refu Nokuraramisa inaye, pasi kwazvo mafuta manwiro (mafuta-kuponesa), pasi simba (simba rokuponesa), izvi zvinoshamisa kuderedza mukuru uchishandisa mari yedu mhepo compressors.
BC - M1 twasu-mutsetse bhodhoro anoridza muchina ndiye ldpe-g-nvp nomutsa akanga ruoko chekawo mudumbu otomatiki bhodhoro anoridza zvokushandisa, zvichienzaniswa zvakazara kwangoitwa muchina, mumuchina chikuru chinoratidza mhando otomatiki conveyer irikupa bhodhoro mudumbu, mudumbu anogona chete kuvimba chakagadzirwa kupedza. Muchina uyu anogona icharidzwa zvikuru 1500 Rine mamiririta PET sezvo mbishi zvinhu chero chimiro carbonated chinwiwa bhodhoro, hombodo chicherwa mvura, zvizoro hombodo, hombe diameterhigh tembiricha nemishonga bottlesother kavha mugaba. The Bhodhoro Kugadzirwa kubva mabhodhoro 1000 / awa kusvika 1200 mabhotoro / awa, akasiyana specificationsconfigurationstructure magadzirirwo chinogona zvidikanwi nemakasitoma siyana panguva homeabroad.
1> Microcomputer kudzora hurongwa, yakagadzikana unongotaura.
2> michini chiedza chubhu kudziyisa, simba rakapinza simba, Mudziyo preform kutenderera ari pakutsamwisana muchadenga, dzakafanana kudziyisa, rapidreliable.
3> sepombi ari kudziyisa nharaunda, achiratidza ndiro widthheight vari chinjika, kuti aenderane hombodo dzakasiyana maumbirwo billet kudziyisa, pamwe otomatiki chiutsi mudziyo, kuitira kuti gwara kugara tembiricha.
4> Safe kuzvipira nokukiya mudziyo, kana mumwe muitiro anotadza, Chirongwa vachangoerekana chinja kune ngozi mamiriro.
5> Mumwe chiito nechido humburumbira, pasi ruzha.
6> Production kwacho kuri hunoyemurika Semi-automatic, achiponesa mari, mukuru kushanda, yakakunakira kuvhiyiwa, nyore maintenancehigh kuchengeteka, etc.
purojekiti chikwata BC-M1 BC-M2 / 5L BC-M2 BC-M / 10L BC-MJ2 / 2L
yauinayo BPH 1000-1200 800-1000 2000-2500 200-300 1200-1800
Maximum chinzvimbo L 2 5 1.5 10 2
The sandara dhayamita MM 38 200 38 260 105
Max.Bottle nokukwirira MM 300 300 300 450 200
The mhango nhamba Cav 1 2 2 1 2
Heating simba KW 14 48 32 48 48
Kushandiswa simba KW 14 32 16 16 16
The simba zvitengeswa 380v 3phase 60hz
Pressure basa Mpa 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Furidzira mhepo nevezera Mpa 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
SIZE (L * W * H) MM 2.0 * 1.6 * 2m 4.2 * 1.8 * 2m 2.6 * 1,7 * 2m 3.2 * 1.6 * 2m 2.8 * 1.6 * 2m
uremu T 1.2 3.6 1.5 3.0 2.0
Previous: 28mm pco preform muforoma
Next: Automatic Ridzai richigadzirisa Machine
1000l Ibc Ridzai richigadzirisa Machine
20l Extrusion Furidzira richigadzirisa Machine
3l Ridzai richigadzirisa Machine
5l Ridzai richigadzirisa Machine
Furidzira richigadzirisa Machine Price
Kuvhuvhuta Machine Film
Bottle Ridzai Machine
Bottle Ridzai richigadzirisa Machine
Double Station Ridzai richigadzirisa Machine
Extrusion Ridzai richigadzirisa Machine Price
Good Quality Ridzai richigadzirisa Machine
Hdpe richigadzirisa Ridzai Machine
Ibc Ridzai richigadzirisa Machine
Jekiseni Ridzai richigadzirisa Machine Price
Jekiseni Ridzai richigadzirisa Machine
Manual Ridzai Machine
Manual Ridzai richigadzirisa Machine
Mukaka Bottle Furidzira richigadzirisa Machine
Pet Bottle Furidzira richigadzirisa Machine
Pet Bottle ichivhuvhuta Machine
Pet muchirongo Ridzai Machine
Pet Plastic Bottle ichivhuvhuta Machine Price
Pet Preform Furidzira paaivaumba Machine
Pet Stretch Ridzai richigadzirisa Machine Manufacturer
Pet Stretch Furidzira paaivaumba Machine
Plastic Ridzai richigadzirisa Machine
Plastic Bottle Ridzai richigadzirisa Machine
Plastic Bottle ichivhuvhuta Machine
Plastic Manual Ridzai richigadzirisa Machine
Plastic Oil Bottle Ridzai richigadzirisa Machine
Small Extrusion Ridzai richigadzirisa Machine
Small jekiseni Ridzai richigadzirisa Machine
Stretch Ridzai richigadzirisa Machine